🥇 Akaụntụ na lọjistik
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 771
Akaụntụ na lọjistik
Nwebiisinka na-echebe ụzọ pụrụ iche nke akpaaka azụmahịa nke a na-eji na mmemme anyị.
Anyị bụ onye nbipụta ngwanrọ akwadoro. A na-egosipụta nke a na sistemụ arụmọrụ mgbe ị na-agba ọsọ mmemme anyị na ụdị ngosi.
Onye mbipụta enwetara nkwenye
Anyị na òtù dị iche iche gburugburu ụwa na-arụkọ ọrụ site na obere azụmahịa ruo ndị buru ibu. Ụlọ ọrụ anyị gụnyere n'akwụkwọ ndekọ aha nke ụlọ ọrụ mba ụwa ma nwee akara ntụkwasị obi electronic.
Ihe ịrịba ama nke ntụkwasị obi
Video nke aza ajụjụ na lọjistik
Ọnụ ahịa ndị a bara uru maka naanị ịzụrụ mbụ
Laghachi na ọnụahịa
Dezie ịza ajụjụ na lọjistik
Ọ nweghị ụlọ ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na-enweghị usoro njikwa arụmọrụ nke njikwa usoro niile, ọrụ arụ ọrụ, nke mmegharị ụlọ nkwakọba ego na ụgwọ ọ kpatara. Dị ka nzukọ ọ bụla ọzọ, ụlọ ọrụ lọjistik nwere nkọwapụta nke aka ya, nke mmemme USU-Soft na-agbanwe na-enweghị nsogbu. Site n'enyemaka nke ngwanrọ a, ịza ajụjụ na lọjistik ga-agbanwe site na ọrụ siri ike na usoro mgbagwoju anya ka ọ bụrụ ngwa ọrụ nyocha zuru oke, njikarịcha na mmelite nke usoro nhazi dị.
Ngwaọrụ, ihe ndekọ nke ya chọrọ ịhazi mgbanwe data n'oge, chọrọ mmelite ozi na nyocha mgbe niile na usoro ọ bụla iji mezuo ya. Ngwa USU-Soft na-enye mmelite nke data dị ugbu a maka akụkụ nke usoro ihe omume ahụ. Ihe mgbochi a nwere ozi edozi n'ime nchekwa: Ego na-echekwa ntọala ego; n'iji folda Ndị Ahịa, ịnwere ike soro nloghachi na mgbasa ozi ma na-eme nyocha ahịa; Tù dị iche iche nwere alaka niile na ndepụta nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ; enwekwara ozi zuru ezu banyere usoro azụmahịa na mpaghara ọrụ, ụkpụrụ oriri mmanụ, ụgwọ ọrụ nke ndị na-ebu ndị ọzọ. Ngalaba Directories na-enye gị ohere ị nweta akpaaka nke nyocha data yana ụdị ọnụọgụ niile na nyocha, nke na-enye aka na izizi data na mkpochapụ nke njehie dị na njikwa arụmọrụ. Accountinglọ nkwakọba ihe na-arụ ọrụ dị mkpa na lọjistik, na usoro a chọrọ iji rụkwaa ngwa ahịa na-enyere aka ịtọlite arụmọrụ n'ụlọ nkwakọba ngwa ngwa na iweghachi ụlọ nkwakọba ihe n'oge yana akụkụ ndị ọzọ maka ụgbọ ala ahụ. A na-ejikwa sistemụ eletrọniki na usoro nnabata elektrọnik na-eme ka a na-eme ka ndị ọrụ niile mara ọkwa banyere mbata nke ndetu ọrụ ọhụụ ma nyochaa oge ọrụ ahụ. Ya mere, a na-emezi nhazi nke usoro ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ.
Usoro ihe omume nke ịkọ ajụjụ ọnụahịa nke ọrụ lọjistik na-enye gị ohere ịmebe ọrụ dị mma na ndị ahịa site na ịchekwa nchekwa data ndị ahịa, ịmepụta arịrịọ maka njem, nsuso arụmọrụ, yana ịchịkwa nnata nke ego. Ọrụ nke ndị njikwa n'okpuru nlekọta dị nso nke njikwa na-eme ka ọrụ ụgbọ njem ka mma ma nye ụlọ ọrụ ahụ asọmpi. Accounting nke ndị ahịa na lọjistik site na enyemaka nke USU-Soft system logistics control dị mfe na ngwa ngwa, ebe ị na-enweta ọtụtụ ngwaọrụ maka ịrụ ọrụ na nchekwa data CRM. Ngalaba Akụkọ na-enye gị ohere ibudata akụkọ gbasara ego na njikwa banyere ọrụ enyere, ụgwọ akwụ ụgwọ, nkwụghachi ụgwọ, njikwa ngwaahịa na ịba uru. Akụkọ nwere ike ịnwe eserese eserese na eserese ma nwee ike mepụta maka oge ọ bụla. Accounting na logistics na-enye ohere di iche iche maka nyocha zuru oke banyere ahia, gunyere na ihe ndi ozo. Otu uru dị iche iche nke ngwanrọ ahụ bụ ikike iji nyochaa ọganihu nke mmezi mgbe niile: ụgbọ ala ọ bụla nọ n'ụgbọ mmiri nwere ọnọdụ nke ya na ụbọchị mmezi ya, ihe mmemme nke ịdọ aka na ntị dọrọ mkpa maka nke a. Yabụ, mmemme nke lọjistik na-eme ka ndozi ọfụma na nlele ọnọdụ nke ugbo ala ahụ dị ugbu a, yana nnweta nke akụrụngwa maka arụmọrụ nke iwu.
Usoro nyocha na logistics bụ ngwa ọrụ bara uru iji mejuputa atụmatụ nke ụlọ ọrụ yana iji melite usoro na ịhazi ogo ọrụ. The lọjistik aza ajụjụ software na-etinye niile arụmọrụ iji, na gị ahịa ga-maa-enwe obi ụtọ na ọrụ gị! Atụmatụ ọrụ a na-ahụ anya na-enye gị nkọwa zuru oke nke usoro ndị a na-aga n'ihu: ụzọ zuru ezu maka njem ọ bụla, ịdị njikere ụgbọ ala, isi nke mbupu na ibudata, ndị e kenyere ndị na-eme ihe nkiri, ngụkọta ụzọ na mmefu niile, yana nnata ego. n'aka onye ahịa. Usoro ihe omume nke njikwa oru na-achota mmepe nke atumatu ego ruru eru n'ihi nyocha nke ego na-aga n'ihu na nyocha nke irè mkpebi mkpebi. Otu sọftụwia na-arụ ọrụ nke ngalaba niile na nkewa na-enye gị ohere ịkwado nnukwu ọrụ na ịkwado data arụmọrụ na ụlọ ọrụ niile.
N'ihi mgbanwe nke ntọala sistemụ, sọftụwia ahụ dabara maka ụdị nzukọ ọ bụla ma gbanwee maka nkọwa nke ọrụ ahụ. Nchịkọta ụlọ nkwakọba ihe USU-Soft na-enyere aka iji mejupụta ngwongwo n'oge na-echekwa ihe na oke zuru oke. Get nweta ndepụta nke ozi zuru oke gbasara ngalaba njem ọ bụla: ọnụọgụ, akara, ndị nwe ha, iburu ikike; ọ ga-ekwe omume ibudata akwụkwọ, tinyere akwụkwọ ikike paspọtụ. Akụrụngwa ahụ na-echetara oge nke dochie akwụkwọ maka njem iji rube isi n'iwu ndị guzobere. Enwere ike ịchekwa ụdị nke elektrọnik nke akwụkwọ dị iche iche na sistemụ (nkwekọrịta, ụdị akwụkwọ, akwụkwọ ọnụahịa, kaadị mmanụ), yana nbudata ngwa ngwa ha. Nwere ike ịdepụta usoro mmezi atụmatụ na nyochaa mmejuputa ha. Nchịkọta zuru ezu nke ụlọ nkwakọba ihe na nyocha nke nhazi nke ọrụ nke ụlọ nkwakọba ihe ga-abụ ezigbo enyemaka.
Colordị dị iche iche na ọnọdụ nke njem ụgbọ njem na-egosi n'ụzọ doro anya ihe ruru nke ugbo ala na ndozi na njikere maka ojiji. Ngwakọta nke ozi sistemụ ndekọ ego yana websaịtị ụlọ ọrụ gị dị, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Na-agbaso ụgbọ ala nke ọ bụla: ọnụọgụ nke nkwụsị, ebe na oge ị na-adọba ụgbọala, ịgba kilomita kwa ụbọchị maka ụbọchị ọ bụla, na ịgwa ndị ahịa ozugbo. Ga-enwe ike iwepụta akụkọ banyere ọrụ onye ọrụ ọ bụla ma nyochaa arụmọrụ ya na ikike iji oge ọrụ rụọ ọrụ nke ọma.
Ofdị nke ịrịọ *Zụrụ usoro ihe omumeAskjụ ajụjụ NhaziỌnụ egoỌkọlọtọỌkachamara
Ngwaọrụ na njem
Akaụntụ na ịchịkwa njem
Akaụntụ na nhazi nke iga
Akaụntụ maka ndị na-edekọ logistist
Akaụntụ maka ndị ozi ahụ
Akaụntụ maka onye ezipụ
Nyocha maka onye na-ebugharị
Akaụntụ maka ịnye ego ego
Akaụntụ maka inye ndị ọrụ njem
Akaụntụ na ụlọ ọrụ na-ebugharị
Akaụntụ na nzukọ njem
Akaụntụ nke ụgbọ ala njem
Akaụntụ nke iga ụgbọ ala
Akaụntụ nke ụgbọ njem ụgbọ ala
Nyocha ego nke ụlọ ọrụ njem
Akaụntụ banyere ebu ibu
Akaụntụ nke nnyefe ọrụ
Akaụntụ maka ibu ọrụ mbugharị ibu
Akaụntụ nke ugbo ala ibu
Akaụntụ nke ngwa ahịa
Akaụntụ nke njem mba ofesi
Akaụntụ banyere njem njem
Akaụntụ nke arịrịọ maka njem
Akaụntụ nke ọrụ nke njem
Akaụntụ nke onunu
Accounting nke nkwado
Akaụntụ nke iga
Akaụntụ nke igafe
Akaụntụ nke njem na nnyefe
Akaụntụ nke ọrụ njem
Akaụntụ nke njem njem
Akaụntụ nke ugbo ala na ndị ọkwọ ụgbọala
Nyocha banyere ụgbọ ala
Akaụntụ maka ọrụ njem
Usoro ego maka ngwa ngwa
Akaụntụ ugbo ala akuko
Nyocha ọrụ nke ụgbọ njem ụgbọ ala
Nnyocha nke ụgbọ njem ụgbọ ala
nyocha nke ụlọ ọrụ ụgbọ njem
Nyocha gbasara ego njem
Nyocha nke ọrụ njem
Ngwa maka ụgbọ njem
Ngwa maka ụlọ ọrụ ụgbọ njem
Ngwa maka ọkọnọ
Akpaghị aka njem management usoro
Akpaaka maka ọrụ ozi
Akpaaka nke ibu ajụjụ
Akpaaka nke njem
Akpaaka nke njikwa njem
Usoro akpaaka maka njem
Automobile aza ajụjụ
Akaụntụ ụgbọ mmiri
Nchekwa ụgbọ mmiri na-achịkwa
Nchịkwa ụgbọ mmiri na-achịkwa
Njikwa nnyefe ibu
Cargoes nnyefe usoro
Usoro njikwa ibu
Gogbọ njem na-aza ajụjụ
Njikwa ibu ibu
Nchịkwa ibu ibu
Usoro ibu ụgbọ njem
Tebụl na-ebu ibu
Usoro ibu njem
Accountinggbọ ala aza ajụjụ
Njikwa lọjistia azụmahịa
Njikwa lọjistik ụlọ ọrụ
Njikwa mbupu akpa
Nchịkwa na nyocha nke njem ụgbọ ala
Njikwa ụlọ ọrụ na-ebugharị ụgbọ ala
Njikwa ụgbọ njem na-ebugharị
Nchịkwa nke ụgbọ njem
Njikwa oge nnyefe
Njikwa ndị ọkwọ ụgbọala
Njikwa nnyefe ngwongwo
Nchịkwa nke mbupu ihe
Njikwa nkwekọrịta nkwekọrịta
Njikwa njem nke ndị njem
Njikwa ọrụ njem
Njikwa njem njem
Njikwa ugbo ala
Jikwaa ụgbọ njem
Na-achịkwa ibu ibu
Njikwa ụgbọ njem mba ofesi
Nchịkwa maka ime njem
Usoro nchịkwa maka njem ụgbọ ala
Sistemụ njikwa na lọjistik
Crm maka nnyefe
Usoro Crm na lọjistik
Mmanụ mmanụ dizel
Disipi management nke njem
Budata mmemme a maka ibu njem
Ndị ọkwọ ụgbọala na-aza ajụjụ
Nlekọta oru oma oru
Usoro Erp na lọjistik
Accountinggba ụgwọ ụgbọ elu
Ndị na-ebugharị ebugharị
Njikwa mmanụ ọkụ
Usoro nchịkwa mmanụ
Mmanụ ụgbọala aza ajụjụ
Akaụntụ nnyefe ngwongwo
Usoro nnyefe ngwongwo
Ngwongwo nzi njikwa
Asingbawanye arụmọrụ nke njem njem
Nhazi usoro ihe omuma na nhazi
Usoro ihe omuma na ngwa oru
Usoro ozi nke njikwa njem
Usoro ozi maka njikwa njem
Akwụkwọ ndekọ ego nke ụgbọ njem
Akwụkwọ ndekọ akụkọ banyere ọpụpụ njem ụgbọ ala
Akwukwo maka iga njem
Ngwaọrụ na njikwa nke ọkọnọ
Ngwa oru na njikwa nke onunu
Ngwa oru na njikwa nke iga
Lọjistik na njikwa nke nkwakọba
Njikwa lọjistik nke onunu
Usoro nhazi oru
Usoro njikwa lọjistik
Lọjistik nke njem njem
Nyocha ndekọ ego
Nchịkwa nke ụgbọ njem ụgbọ ala
Njikwa ụgbọ njem
Njikwa nke ọrụ lọjistik
Nchịkwa nke ụlọ ọrụ ụgbọ njem
Njikwa nke ibu ibu
Njikwa nke njem mba ofesi
Nchịkwa nke njem njem
Nchịkwa nke njem ụgbọ mmiri
Njikwa nke agbụ ígwè
Nchịkwa nke usoro ọkọnọ
Nchịkwa nke ụgbọ ibu
Njikwa nke ngalaba lọjistik
Njikwa nke njem
Nchịkwa nke njem n'okporo ụzọ
Nchịkwa nke ọrụ njem
Njikwa nke iga njem
Usoro njikwa nke njem
Usoro njikwa nke iga njem
Optimization nke nnyefe ọrụ
Optimization nke lọjistik
Njikarịcha nke njem
Nhazi usoro na lọjistik
Nhazi na njikwa nke njem
Nhazi na njikwa nke iga njem
Nhazi oru nhazi
Nhazi nke njem
Nhazi nke njem nke ibu
Nhazi nke ibu ibu
Nhazi nke ahia ibu
Nhazi nke njikwa nke onunu
Nhazi nke ebufe ahia
Nhazi nke usoro nnyefe
Nhazi nke ebufe nke ngwongwo na ndi njem
Nhazi nke njem na njikwa n'okporo ụzọ
Nhazi nke njikwa njem
Nhazi nke akuko ugboala
Nhazi nke ọrụ nke ụgbọ njem ụgbọ ala
Nhazi nke oru nke ugbo njem
Nhazi oru nke iga njem
Ndị ọrụ na njikwa
Atụmatụ na njikwa nke njem
Production lọjistik usoro
Njikwa nnweta ngwaahịa
Mmemme maka ịkọ njem
Mmemme maka njikwa njem ụgbọ ala
Mmemme maka ịkọ ajụjụ banyere ụgbọ njem
Mmemme maka ụgbọ ala
Mmemme maka ịkwụ ụgwọ ego
Mmemme maka ụgbọ njem ụgbọ ala
Mmemme maka ụgbọ njem
Mmemme maka ịme njem ụgbọ ala
Mmemme maka ibu
Mmemme maka ibu ebu
Mmemme maka ịmepụta ụgbọ elu
Mmemme maka ijuputa na waybills
Mmemme maka ụgbọ elu
Mmemme maka ụgbọ njem mba ofesi
Mmemme maka ndị na-edekọ logistist
Mmemme maka njem njem
Mmemme maka onunu
Mmemme maka ụgbọ mmiri
Mmemme maka ụgbọ ala aza ajụjụ
Mmemme maka nkwado
Mmemme maka ndị ozi ahụ
Mmemme maka ozi obu ozi
Mmemme maka nnyefe
Mmemme maka nnyefe ọrụ
Mmemme maka izipu ozi
Mmemme maka ebugharị
Mmemme maka mmanụ ụgbọala
Mmemme maka onye na-ezipụ njem n'okporo ụzọ
Mmemme maka iga
Mmemme maka izipụ ụgbọ
Mmemme maka njem
Mmemme maka ebu nke ibu
Mmemme maka akwụkwọ njem
Mmemme maka njem logistic
Mmemme maka ugbo ala
Mmemme maka ụzọ ịgba ụgwọ
Mmemme ụgbọ njem na-aza ajụjụ
Mmemme nke ụgbọ njem
Mmemme nke ngụkọta njem
Mmemme ụgbọ njem
Ndebanye aha nke ụgbọ njem
Akụkọ banyere ụgbọ njem ụgbọ ala
Njikwa njem okporo ụzọ
Ngwa ngwanrọ maka ibu njem
Software maka iga
Nlekọta nlekọta na usoro njikwa
Usoro nlekọta nlekọta
Nweta usoro nyocha
Tụkwasịnụ akara usoro
Nchịkọta nlekọta njikwa
Tụkwasịnụ management usoro
Sistemụ maka akụrụngwa ụgbọ njem
Sistemụ maka akpaaka njem
Sistemụ maka ụgbọ njem
Usoro maka njikwa nke ugbo ala
Sistemụ maka logistic
Sistemụ maka ndị ozi ahụ
Sistemụ maka nnyefe ọrụ
Sistemụ maka ebugharị
Sistemụ maka iga
Usoro maka igafe
Sistemụ maka akwụkwọ njem
Usoro maka iga njem
Sistemụ nke ibu ibu
Usoro nke njikwa njem
Usoro nke ebu
Usoro njem nke ndị njem
Tebụl maka ụgbọ njem
Isiokwu nke ibu ebu
Ationsgbọ njem na njikwa nke njem
Tebụl ụgbọ njem
Accountinggbọ njem na-aza ajụjụ
Transportation ajụjụ usoro
Ationgbọ njem na nchekwa nchekwa
Usoro nzukọ njem
Akpaaka ụlọ ọrụ ụgbọ ala
Usoro njikwa njem
Entergbọ njem azụmahịa
Transport enterprise management usoro
Loggbọ njem lọjistik akpaaka
Njikwa lọjistik management
Loggbọ njem logistics management usoro
Transport lọjistik usoro
Njikwa njem na ụlọ ọrụ ahụ
Usoro mmemme maka kọmputa
Ọrụ njem ngwa
Accountinggba ụgwọ ụgbọ
Kaadị ndekọ ego ụgbọ
Accountinggbọ njem ndekọ ego
Ugbo ala na-eji ego
Waybills na-aza ajụjụ
Waybills na-edekọ akụkọ
Ndebanye aha Waybill
Ebe ọrụ eziga